Mashandisiro ekushandisa "Remote Play" pane PlayStation 4 paMac | IPhone nhau
Mashandisiro ekushandisa PlayStation 4 "Remote Play" paMac
Sezvatakatoyambira nezuro, sarudzo yeRemote Play (kana kushandiswa kure) kweiyo PlayStation 4 ichave ichiwanikwa kune ese Mac OS uye PC munguva pfupi, iyo firmware inogadziridza 3.50 yeiyo Sony koni ichave iyo mhosva iyo yakasvika kune Vazhinji yevashandisi vePC vane basa rakanakisa iro ratinogona kutanga kutamba PlayStation 4 kubva pakombuta yedu, zano rakanaka kune avo vane, semuenzaniso, iMac 5K, kunyanya kana tisingawane terevhizheni iyo PlayStation iripo. iri. Izvo zvichatiponesa kanopfuura kamwe chete kukurukurirana nemunhu anogara mukamuri panguva iyoyo, uye pamusoro pezvose, zvinotibvumidza kutamba nehunhu hwakanaka uye kugadzikana. Isu tinotsanangura danho nedanho maitiro ekushandisa Remote Play yeiyo PlayStation 4 yako paMac OS.
Sezvatakambotaura, iwe unongofanirwa kugadzirisa yako PlayStation 4 kune firmware 3.50 uye ichango shanda ichi chishandiso chakatangwa naSony kuita inowirirana maPC nemaMacs nekushandisa kure, ichitibvumidza kuwana zvakanyanyisa kubva ku PlayStation yedu chero kwatinenge tiri, ndiko kuti, kubatana kunofanirwa kuve kwakadzikama uye kwakatsiga, chero mhando yekubatana haizokoshe isu kuti tikwanise kuerera nekuigamuchira, nekudaro, kushandisa iri kure kushandiswa kwePlayStation paPC isu tichafanira kubatana kwakanaka.
1 Zvinotarisirwa zveRemote Kutamba kweiyo PlayStation 4
2 Shandisa Remote Play pane yedu PlayStation 4
3 Aya ndiwo mashandiro anoita PlayStation 4 Remote Play
4 Kubatanidza mhando
Zvinotarisirwa zveRemote Kutamba kweiyo PlayStation 4
Chekutanga pane zvese isu tichave nechokwadi chekuti PC yedu kana Mac OS inosangana nezvinodiwa, aya ndiwo masisitimu anoshanda ayo Sony application inowirirana.
Windows 10 kana gare gare
Saka kana iwe uchifarira, shingairira kugadzirisa mudziyo wako, chaizvo chero mudziyo unoshanda neWindows 8 unoenderana neWindows 10. Panyaya yeMacs, zvinogona kunge zvichinyanya kuomarara, asi enda kumberi. Iye zvino tichaenda kune webhusaiti iyo Sony yakagonesa kurodha pasi Remote Play application inoenderana neWindows uye Mac, isu tinopfuurira kurodha pasi mutengi anotora nzvimbo diki padiki pane diski, saka hatifanire kunetseka.
TORA PASI REMOTE PLAY PROGRAM
Iye zvino isu tinongofanirwa kuve nechokwadi chekuti edu maDualShock 4 macomputer ane bhatiri uye ane Micro-USB tambo padhuze, sezvo isu tichizobatanidza kutonga kuPC netambo.
Shandisa Remote Play pane yedu PlayStation 4
Shandisa Remote Play. Sarudza
(Zvirongwa)> [Remote Ridza Kubatanidza Masystem] uyezve iyo [Gonesa Remote Play] cheki bhokisi.
Shandisa PS4 yako ™ console sekutanga. Sarudza
(Zvirongwa)> [PlayStation ™ Network / Account Management]> [Activate sePrimary PS4]> [Activate].
Kuti utange Remote Play kana iyo PS4 ™ koni iri mumamiriro ekurara, sarudza
(Zvirongwa)> [Zvirongwa zvekuchengetedza magetsi]> [Seta mashandiro anowanikwa mumamiriro ekurara]. Wobva wasarudza iyo [Ramba wakabatana neInternet] uye [Batidza iyo PS4 kubva kunetiweki] cheki mabhokisi.
Aya ndiwo mashandiro anoita PlayStation 4 Remote Play
Tichatanga kunyorera kekutanga uye ichatibvunza isu kutanga tasanganisa iyo DualShock kuMac kuburikidza netambo, isu tinoteerera uye tinoibatanidza. Kana tangobatana, tinodzvanya "tanga" uye ichatikumbira account yedu yePlayStation Network.
Isu tinorangarira kuti zvinokurudzirwa, pamberi pekutanga kutanga, kuvhura iyo koni uye kuisiya irimo mumamenyu, neRemote Play yakaitwa sezvakatsanangurwa pamusoro uye mumushandisi anoenderana neiyo PlayStation Network account yatinozozivisa.
Saka isu tinopinda yedu PlayStation Network zita rekushandisa uye password uye ichatanga kutsvaga iyo console mukati medu yenzvimbo network. Kana isu tichiona kuti zvinotora nguva yakareba, iine mumwe murairo kana kudimbura iyo yatakabatanidza kubva kuMac, tinoenda ku PlayStation 4 marongero menyu, tinoenda ku "activate Remote Use" saka iyo console ichatipa kodhi iyo inopinda mairi muMac mutengi (pazasi pane bhatani rinoti "activate by code") kana iwe uchikumbira, tichakurumidza kugadzirisa kubatana.
Kana tangopedza, yedu PlayStation 4 skrini ichaonekwa ichitaridzika paMac yedu.Uyezve, yakanaka pfungwa yeiyi ndeyekuti nekuda kweRemote Use tinogona kumutsa PlayStation 4, ndiko kuti, pese patinayo muhope nzira tinogona kuitangisa. zvakananga kubva kuMac.
Iwe unozogona kusarudza pakati pechisarudzo chinotevera uye nePSPS kumhanyisa sarudzo, zvinoenderana neyakaganhurirwa yekubatana kwako.
Sarudzo dzekugadzirisa: 360p, 540p, 720p (default: 540p)
Chimiro cheyero: Standard (30fps), Yakakwirira (60fps) (default: Estándar)
Nekudaro, isu tinongowana chete bhatani rekusarudza izvozvi muWindows 10, muMac OS isu hatisati taziva nzira yekuwedzera resolution kusvika ku720p.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Mashandisiro ekushandisa PlayStation 4 "Remote Play" paMac
Hunhu nemafuremu muMac, anogona kugadziridzwa kubva paKufarira kweiyo kure yekutamba app. Kune vashandisi vane 5K iMac, 720p inodarika kurongeka nekuti nedudziro yakawanda kwazvo pachiratidziki inotaridzika kunge yakaipa kwazvo pane iyo 1080p HD yekutarisa. Kutenda nezvako!
Dualshock haisi kundishandira. Mumwe munhu zvinoitika? Iwe unofanirwa here kuita chimwe chinhu kunze kwekuchisanganisa ne USB?
Edza kuibatanidza neakavhurika app, ndiwo mashandiro andaiita. Uye neiri kure kure, chenjera.
Izvo hazvisi kundishandira. Imwe pfungwa?
Iti, kune avo vane inopfuura imwechete PS4, hazvidi kuti koneti iitwe seyakanyanya, yakabatanidzwa muRemote Use kubva pazviruva uye zvinoshanda zvakafanana.
Iyi ndiyo iPhone SE iyo Apple ingadai yakaburitsa (uye iwe unogona kuzviita iwe)